नयाँ नेपालको बहस | चितवन पोष्ट दैनिक
नयाँ नेपालको बहस
२०७० चैत्र ११, मंगलवार ०२:४१ गते
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ सँगै सुरू भएको नयाँ नेपालको बहस बीचमा केही समय मत्थरजस्तो देखिए पनि विगत केही महिनादेखि फेरि चर्चामा छ । त्यसो त नयाँ नेपाल भनेको के हो ? र, यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा कोही पनि स्पष्ट छैन । स्वरुपको अस्पष्टताकै बीचमा चलेको नयाँ नेपालको बहस भने नेताका शासनदेखि कर्णालीका जनताले खान नपाउने रासनसँग समेत जोडिएको छ । नयाँ नेपाल किन बनेन ? यसका मुख्य दोषी को हुन् ? भन्ने मात्र नभएर अब नयाँ नेपाल बनाउने नवसारथिहरु को–को हुन सक्छन् ? भन्नेसम्मका विचारहरु मिडियाहरुमा यत्रतत्र छरिएका पाइन्छन् ।
नयाँ नेपाल के हो ? र, यसको स्वरुप कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा निकै लामो बहस, चिन्तन र विचार–विमर्श हुन सक्तछ । नेपालकै समाजवादी नेता बीपी कोइरालाले एउटा परिवार जसको सानो घर होस्, हल गोरू होस् र एउटा दुहुनो गाई होस् भनेर समाजवादको व्याख्या गरेका थिए । त्यही बीपीको समाजवाद नै नयाँ नेपाल हो भन्नेदेखि लिएर विश्व साम्यवादका गुरू कार्लमाक्र्सको परिकल्पनामा आधारित पूर्ण साम्यवाद नेपालमा लागू नभएसम्म नयाँ नेपाल हुँदै हुँदैन भन्नेसम्मका दृष्टिकोणहरु विभिन्न कोणबाट नयाँ नेपालको सन्दर्भमा आइरहेका छन् । वास्तवमा नयाँ नेपालको कुनै सीमारेखा नै छैन । जब सीमारेखा नै नभएको विषयमा बहस र तर्क गरिन्छ, तब ती तर्कहरुमा कसैको तर्कलाई सुतर्क र कसैको तर्कलाई कुतर्क भनिरहनुको अर्थ पनि छैन ।
त्यसो भए के नयाँ नेपाल भन्नु नै गलत हो त ? अथवा, के हो त नयाँ नेपाल ? भन्ने प्रश्न जन्मिनु स्वाभाविकै हो । जुन दिन आमजनताको न्यूनतम गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको सुनिश्चितता हुन्छ, जुन दिन रोजगारीको वा सुविधाको खोजीमा कसैले पनि विदेशतिर जानुपर्दैन र विदेश गएका नेपालीहरु पनि आफ्नै देश ठीक भन्दै मातृभूमि फर्कन थाल्छन्, त्यही दिन नयाँ नेपाल बनेछ भनेर बुझे हुन्छ । अन्यथा, कुनै पार्टी सत्तामा पुगेको भरमा वा कुनै तन्त्र वा तान्त्रिकले शासन गरेकै भरमा नयाँ नेपाल भनिन्छ भने त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्नुबाहेक केही होइन । आफ्नो आँखामा छारो हालेको थाहा नपाउने कसैले नयाँ नेपाल बुझ्दछ भने दृष्टिविहीनले हात्ती छामेको कथाबाहेक अर्को हुन सक्तैन ।
अब रह्यो नयाँ नेपाल किन बनेन भन्ने कुरा । जसरी नयाँ नेपाल के हो भन्ने विषयमा आ–आफ्नै बुझाइ छन्, त्यसैगरी नयाँ नेपाल नबन्नुका पछाडि के कारण छन् भन्ने सबैका आ–आफ्नै तर्क र बुझाइ छन् । अरुले पत्याऊन् वा नपत्याऊन्, आफ्ना बुझाइ सर्वोत्कृष्ट बुझाइ भन्न पनि कोही पछि पर्दैनन् । हरेकले नयाँ नेपाल नबन्नुका पछाडि दोषी अरुलाई देखिरहेका छन् । फरक यत्ति हो कि कोही अलि कडा शब्दमा अरुलाई दोषी देख्लान्, कोही नरम शब्दमा भन्लान् ।
नयाँ नेपाल नबन्नुमा जनताको दृष्टिमा नेताको निकम्मापना होला भने नेताको दृष्टिमा कर्मचारीतन्त्रको बेकम्मापना होला । अर्थविद्हरु भन्लान्– हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था यसमा दोषी छ । कूटनीतिज्ञहरु भन्लान्– नयाँ नेपाल नबन्नुको कारण हाम्रो पराधीनता हो । देश छोडेर विदेशतिर हान्निँदै गरेका डिग्रीधारीहरु भन्ने गर्लान्– नेताले देश बिगारे हामी त विदेशतिर लाग्यौँ । उता, विदेश जान नसकेर देशमै भौँतारिइरहेकाहरु चाहिँ भन्लान्– देशको स्रोत र साधनको लगानीमा ठूलो मान्छे हुने अनि श्रमजति विदेशमा बगाउने भएपछि देशको यो हालत नभएर कस्तो हुन्छ त ?
क्रान्तिकारी धारकाहरु कुशासनले देश नबनेको ठान्छन् भने यथास्थितिवादीहरु खोक्रो क्रान्तिले देशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणलाई तहसनहस पारेको देख्छन् । जनता चेतनशील नभएर देश नबनेको ठान्ने पनि प्रशस्तै छन् भने जनता बढी उच्छृङ्खल र गैरजिम्मेवार भएकै कारण देश नबनेको देख्नेको जमात पनि कम छैन । आखिर सबैको बुझाइमा कोही न कोही दोषी छन्, तर कसैको बुझाइमा पनि आफू दोषी छैन ।
यस्ता सबै बुझाइहरु पूर्णतः असत्य हुन् भन्ने ठाउँ पनि छैन । आंशिक रुपमा सबै दाबी सही हुन् । कुनै पनि कुरा बन्न वा बिग्रिनका लागि कुनै एउटा मात्र कारण पर्याप्त हुँदैन । धैरै राम्रा कुराहरुको समिश्रणमा देश राम्रो बन्छ र नकारात्मक कुराहरु हाबी हुँदै गयो भने देश बिग्रँदै जान्छ । त्यसैले, मुख्य कुरा के हो भने नराम्रा कुराहरुलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र राम्रा कुराहरुलाई कसरी बढवा दिँदै जाने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हो ।
देश बन्न नेता र नेतृत्व सक्षम हुनुपर्दछ । तर, देश बन्न नेता र नेतृत्व जति सक्षम र जिम्मेवार हुनुपर्दछ, जनता पनि त्यति नै चेतनशील र जिम्मेवार हुनुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधार आउनुपर्दछ । पराधीनताबाट मुक्ति नपाई पनि नयाँ नेपाल सम्भव छैन । पलायन भैरहेको दक्ष जनशक्तिलाई पनि रोक्नुपर्दछ । मागेर कहिल्यै खल्ती भरिँदैन, डोनेसनको भरमा नयाँ नेपाल हुँदैन । नयाँ नेपाल बन्न आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिनुको विकल्प छैन । राजनीतिक परिवर्तन पनि चाहिन्छ र त्यसको उचित व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्दछ । तर, कोरा क्रान्ति र कागजी परिवर्तनले मात्र चाहिँ नयाँ नेपाल सम्भव छैन ।
नयाँ नेपाल बन्न सक्ने सम्भावनाहरु धेरै छन् । तर, अभाव छ सकारात्मक सोचको । सम्भावनाहरुको पहिचान गरी पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । नयाँ नेपाल बन्नका लागि जे–जति पूर्वाधार हुनुपर्दछ, ती सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याउनका लागि सकारात्मक सोच चाहिन्छ । ‘मैले गरेर के हुन्छ र ?’ भन्ने मानसिकताबाट हरेक नेपाली मुक्त हुनुपर्दछ । हरेक नागरिकमा ‘गर्नु सबैले पर्दछ, तर सुरूवात मबाटै हुनुपर्दछ’ भन्ने सोचको विकास हुनु आवश्यक छ । जबसम्म नेतादेखि जनतासम्म सबैमा सकारात्मक सोचको विकास हुँदैन र एकले अर्कालाई दोषी देखिरहने दृष्टिहरु परिवर्तन हुँदैनन्, तबसम्म नयाँ नेपालको सपना कोरा कल्पना मात्र हुन जान्छ ।
नयाँ नेपाल बनाउने काम कसैलाई जिम्मा दिइएको वा कसैले टेन्डर पारेको ठेक्कापट्टा होइन । यो कुनै अमूक पार्टी, नेता, समूह वा व्यक्तिको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन । यो त सरकार, पार्टी र जनता सबैको साझा जिम्मेवारी हो । नयाँ नेपाल बनाउन सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीदेखि सडकमा ठेलागाडा धकेलेर जीवन गुजारा गर्ने मजदुरसम्म सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ, मात्र भूमिका फरक छ । प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा बसेर र ठेलागाडा मजदुरले ठेलागाडा मजदुरकै ठाउँमा बसेर आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
हामीमा अरुलाई दोष दिने र आफूचाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिने बानी छ । यो नै नयाँ नेपाल नबन्नुको मुख्य कारण हो । नयाँ नेपालका लागि नेताले गरेनन्, कर्मचारीले गरेनन्, पढेलेखेकाले गरेनन्, धनीले गरेनन्, उद्योगपति र व्यापारीले गरेनन् भनेर त पटकपटक भन्यौँ, तर एक पटक प्रत्येक नागरिकले आफूले आफैँलाई सोधौँ त, नयाँ नेपाल निर्माणका लागि हामी आफूले के–के ग¥यौँ र अरुलाई के–के गर्न अभिप्रेरित ग¥यौँ ? आफ्नो आङको हात्ती नदेखेर अरुको आङको जुम्रा देख्ने प्रवृत्ति त हामीमा हाबी भएको होइन ? आफ्नो अधिकारचाहिँ खोज्ने, तर कर्तव्यचाहिँ भुल्ने काम त हामी आफूबाट भैरहेको छैन ? यदि तपाईं हामीले कर्तव्य भुलेको होइन भने अझै पनि अरुलाई गाली गरेर वा उपदेशक बनेर हामी आफ्नै समय किन खेर फालिरहेका छाँै ?